Maraykanka, 18 April 2018
Arbaco 18 April 2018
Mareykanka oo Duqeyn Ka Geystay Duleedka Kismaayo
Taliska Maraykanka ee qaaradda Afrika ayaa sheegay inay duqayn ka gaysteen waqooyi galbeed ee magaalada Kismaayo, meel u dhow degaanka Jannaay Cabdalle, maalintii Arbacadii.
Aqalka Cad: Trump Wuxuu ka Jawaabaya Weerarkii Kiimikada
Aqalka Cad ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu qorsheynayo weerar gantaallo ah oo ay milatariga Mareykanka ku qaadaan Suuriya.
USA: Itoobiya Ha Xushmeyso Xaquuqul Insaanka
Aqalka Wakiilada ee dowlada Mareykanka ayaa shalay ansixiyay qaraar ugu baaqaya dowlada Itoobiya in ay kordhiso ixtiraamka xuquuqda aadanaha, nidaamka sharciga ah iyo dumoqraadiyadda.
Aqalka Cad: Trump Wuu Ceyrin Karaa Mueller
Aqalka Cad ayaa Isniintii shalay sheegay in madaxweyne Donald Trump uu leeyahay awood uu ku eryi karo Guddiga Gaarka ah ee loo xilsaaray baaritaanka suurtagalnimada faragelin la sheegay in Ruushka uu ku sameeyay doorashadi Mareykanka ee 2016-ki.
Xulafada Mareykanka oo Weeraraya Suuriya
Dowlada Mareykanka ayaa Talaadadi shalay kala tashatay xulufadeeda diyaargarowga tallaabo milatari oo ay ka qaado Suuriya, kadib weerar loo adeegsaday hub kiimiko ah oo Sabtidi lagu qaaday deegaan ay maamulaan mucaaradka Suuriya.